Herinandro tao amin’ny Tontolon’ny Blaogy Kenyana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2018 4:20 GMT
Miblaogy mikasika ny fihaonany tamin'ny Loholona Barack Obama i Alpha Rwath. Manana laza saika efa ho toy ny fiankohofana mihitsy ity Loholona manokana avy ao amin'ny fanjakana Illinois ity noho ny rainy teraka tao Kenya. Tena malaza be loatra ny Loholona Obama ka novàna anarana ho ‘Obama’ mihitsy ny labiera iray mitondra ny anarana hoe Loholona ary tena amin'izany anarana izany mihitsy no anafàran'ny mpanjifa azy!
Voatariky ny ohatry ny fahasambarana ara-panambadiana nomen'ny ray aman-drenibeny i Mutumiaizay efa mpivady nandritra ny 75 taona teo noho eo ary manontany tena eo amin'ny fahalalana nentim-paharazana mikasika ny fitiavana ao amin'ny kolotsaina Afrikana. (Rohy tapaka tsy mandeha intsony)
Tena miahiahy be i Mad Kenyan Woman manoloana ny antom-pisian'ny lahatsoratra iray ao amin'ny gazety eny an-toerana izay miaro ny fandraisana anjara ataon'ireo mpanoratra fotsy ao anatin'ny literatiora Afrikana, sady manontany tena momba izay antony iarovana azy ireny voalohany indrindra.
Asongadin’ i Bankelele ny fidiran'ny Pesa Point, mpilalao vaovao ao amin'ny sehatry ny Milina mpaninjàra Mibaiko Tena (ATM), izay hampiditra tambajotra tsy miankina ana ATM maro ka hahatonga azy ho mpilalao faharoa lehibe indrindra ao anatin'izany.
Miverina kely any Etazonia i Kenyan Pundit rehefa avy nifindra trano tao Kenya ary miblaogy mikasika ny fivoriana PopTech tany Camden Maine niarahana tamin'ireo tanora mpitarika rehetra ao Afrika, blaogera, mpanao politika sy mpikatroka. Nandritra ilay andro voalohany, tonga saina izy fa misy zavatra VITSY banga aminy tamin'ny fiainana tao Kenya.
”Voatositosika kely aho teo ampitadiavako olona afaka hahatakatra ny ”fahalalahana sy hamaroam-pijeriko” sy mahita izany ho toy ny tombony kokoa noho ny hoe soritr'aretina amin'ny tsy fahafantarako ny zavatra tiako ho atao rehefa lehibe aho. Iray amin'ireo zavatra (vitsy) banga amiko aty Etazonia izany, ny fahafahana miverina mamorona tsy aki-janona ny tenanao sy mitrandraka ny lalana tsy dia misy mpandeha kanefa tsy mahavoasazy (mafy)”.